साइन्स नपढ्ने अनि मेरो कुरा उडाउने बेवकुफ हुन् « AayoMail
साइन्स नपढ्ने अनि मेरो कुरा उडाउने बेवकुफ हुन्
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधबार फेरि भने- ‘सास फेर्न गाह्रो भयो अनि बेहोस हुने जस्तो भयो भने मात्रै अस्पताल जानू।’
पटक-पटक सकभर अस्पताल नजानू भन्दै आएका उनको यो पछिल्लो ‘आग्रह’ को निकै आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल नै बनाइएको छ।
यसबारे आयोमेलका पुष्पराज चौलागाईंले डा. गौतमसँग केही प्रश्न सोधेका छन् :
हिजो तपाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोरोना अपटेडमार्फत बेहोस हुन थालेमा वा समस्या परेपछि मात्र अस्पताल जानु भन्नुभयो। सबैतिर यसको विरोध भइरहेको छ। यसमा तपाइँको तर्क के हो?
मैले रुघाखोकीमात्रै लागेको छ भने अस्पताल नजानुहोस् भनेको हुँ। किनभने, अस्पतालमा बेड उपलब्ध छैनन्। त्यहाँ जाँदा झन मानिस बिरामी पर्ने अवस्था आउँछ। खाना बस्न पनि समस्या छ।
मैले राम्रोसँग बुझको छु। मैले बुझेको एउटै कुरा छ, नेपालमा आजका दिनसम्म पनि मानिसले कुरा बुझ्न चाहेका छैनन्। के कुरा बुझ्न चाहेका छैनन् भने यो कोरोना भाइरस विरुद्ध सबैजना मिलेर लड्नुपर्छ। त्यसमा सरकारको पक्ष, विपक्ष, नागरिक समाज, जनता तथा सञ्चारमाध्यम सबै मिलेर लड्नुपर्ने हो।
अहिले पनि मानिसलाई एकअर्काबीच लडाइँ नै चलिरहेको छ। कोरोनालाई हराएपछि कसले कति राम्रो काम गर्‌यो, त्यसपछि विश्लेषण गरौंला नि।
अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिड गरिरहेको छ। ती कुरा सबैले फलो गर्दै जाउँ। स–साना कुरामा छिर्के दाउ खोजेर बोल्नुपर्ने के अवस्था छ?
बाँचेपछि कुरा गरौंला नि। माइतीघरमण्डलामा जुलुस गर्न जाने, एक मिटरको दुरी छ? मास्क लगाएका छौं? भनेको थिएँ। अहिले काठमाडौंमा कति संक्रमण फैलाए। हिजो बालुवाटारमा धर्ना दिनेले त्यसै भनेका थिए। अहिले महाराजगन्जतिर आन्दोलन भनेर डाक्टरहरू पनि भीड गरिहेका छन्।
यस्ता कुराले फरक पार्छ अनि पारिसकेपछि कुरा गरेर हुन्छ कि पार्नुभन्दा अगाडि कुरा गर्नुपर्छ। यो एटिच्युड, ज्ञानको समस्या हो। दुई महिना नलेखेर के हुन्छ? नेगेटिभ नै लेख्न कमेन्ट गर्नुपर्ने?
केही दिनअघि एक बेबकुफले भन्दै हिँडेका थिए– कोरोना विश्व स्वास्थ्य संगठनले व्यापारका लागि उब्जाएको रोग हो। ती व्यक्तिले मलाई जवाफ दिन सक्छन्, हाम्रो ५ सयभन्दा बढी होनहार नेपालीको मृत्यु किन भएको हो? भनेर।
यी कुरा त बाँचेपछि गरौंला नि। बचाउनका लागि जे–जे काम गर्नुपर्छ गरौं न पहिले।
मानिसको जीवन बचाउन भनिएको हो। मानिसलाई के लागेको छ भने खोकी लागे पनि अस्पताल गइरहेको छ। खोकी लागेको मानिस किन अस्पताल जानुपर्छ? घरमा बसेर आराम गरेर तातोपानी खाए दुई–चार दिनमा निको हुन्छ। खोकी त रोग होइन। ज्वरो आएका मानिसहरू प्यारासिटामोल खाएर बसे भयो। किन अहिले अस्पताल धाउनुपर्‍यो?
जो मानिस निदाएका छन् त्यस्तालाई ब्युँझाउन कोसिस गरेको हुँ। जो निदाएको नक्कल गरेका छन्, उनीहरूलाइ म ब्युँझाउन सकिँदैन। उठेर फेरि नेगेटिभ कुरा गरिहाल्छन् त्यस्ता व्यक्तिले।
सरकारले अधिकांश जनतालाई कसो गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर बोल्न प-यो नि। मैले भनेको कुरा गल्ती नै भएछ भने पनि पहिला बाँचौं अनि छलफल गरौंला।
त्यसमा कति गल्ती डा. जागेश्वर गौतम, रामे वा श्यामेको कति गल्ती विश्लेषण गरौंला नि। तर, अहिले बाँचेर काम गरौं भनेको हुँ मैले।
२५ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए। हामीले विश्लेषण गरेका छौं। सबै देश त लकडाउन हुँदैन। एक ठाउँमा बिरामी छ, अर्को ठाउँमा लकडाउन गर्नुको केही अर्थ छैन। म पहिलादेखि तराईका सबै बोर्डर शिल गरेर, विदेशबाट आउने मानिसलाई राम्रोसँग क्वारेन्टिनमा राख्यो भने लकडाउन नै गर्नुपर्दैन कि भन्ने मत राख्ने मान्छे हुँ।
हाम्रो त गरिब देश हो। कमाउन गएका हाम्रै नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनी फर्किन चाहेपछि प्रेसर थाम्न हामीले ल्याउनुपर्‍यो।
पहिला–पहिला केही समस्या नभएका तर संक्रमण पुष्टि भएका लगेर राखेका थियौं। त्यसपछि होम आइसोलेसनको व्यवस्था भएपछि केही हदसम्म व्यवस्थापन भएको छ।
स–साना समस्या भएका मानिस नै घरमा बसेर स्वास्थ्यलाभ गर्नुस् भनेको हुँ। त्यस्तो गरे अस्पतालको बेड पुग्ला अनि लकडाउन गर्नु नपर्ला।